"Isu takasununguka" kuratidzwa muRognac - Nyika yaMarch
musha » Noticias » Press Notes » "Takasununguka" show muRognac
"Takasununguka" show muRognac
11 / 02 / 2020 10 / 02 / 2020 kubudikidza Antonio Gancedo
Musi waFebruary 7, muRognac, France, mubatanidzwa ATLAS wakaratidza rwiyo rwemumhanzi unonzi "Takasununguka"
Musi waFebruary 7, 2020 muRognac, mubatanidzwa weATLAS wakaratidza mhizha yekuratidzira yakanzi "Isu takasununguka", mukati mehurongwa 2ª World March for Peace and Nonviolence.
Gilbert Chiaramonte, mutungamiri weAtlas, anotsanangura kuti sei bato rake rakasarudza kutora chikamu muNyika ino yaMarch:
«Kubva zvakasikwa muna2004, mubatanidzwa wedu hauna kupera kuita kuti masimba avo ekusika awanikwe kune akanaka, akanaka uye akatendeseka zvikonzero.
Pamusoro pekudzidzisa, hunyanzvi, tsika uye nhandaro zvinhu zvakakosha zvinotitungamira mukuremekedza kusiyana, kunzwa, tsitsi uye kugara pamwe. »
«Iyo Artistic Resistance chirongwa chendangariro chepfungwa, chiratidzo, chitsva chitsva.
Zvirokwazvo hazvisi zvekutuka, kuramba zvino zvazviri mumunda wenhau, tsika, mimhanzi, ... asi nezvekuva nehana, chishuwo chekubva pamba uye wozoona kuti pane tarenda chaipo pamberi pedu magonhi
"TIRI MAHARA" ndiko, kuratidzwa kwatakaisa humwe ruzivo kutenderera nekutamba nenziyo. »
Mukuvhurwa kwechiratidziro, 2nd World March for Peace and Non-Violence yakaunzwa naMarie Prost, uyo anotungamira boka renziyo dzenyika "Les Escapades polyphoniques" yeAtlas, uye inhengo yesangano "Nyika isina Hondo uye pasina Mhirizhonga ”, iyo yakatanga kuenda muna Kurume.
Zvadaro zvinoteverwa, uye dzimwe nguva zvakasanganiswa, kusiana kwakakura kwemaitiro ekutamba: Africa, Zumba, Oriental, Classical, Ragga, Modern Fusion, Jazzi, Yazvino, Hip Hop, Flamenco, Bollywood, pamwe chete nenziyo nenziyo dzenyika. Zvese zvakagadzirwa nevadzidzisi nevadzidzi vehukama hweAtlas. Masikati akaitwa mafirimu.
Chiratidziro che "Kweteviolence, simba rekuita chinhu" chakaratidzwa pasuo rekupinda, neCoopération à la Paix Association.
Mumhanzi vhidhiyo chikwereti: "Senzenina", duel uye kurwira rwiyo kubva kuSouth Africa, yakanyorwa chiitiko ne "les Escapades polyphoniques" (Rognac) uye "les Polyphonies bourlingueuses" (Aix en Provence).
Kudhirowa: Marie Prost
Nyika yaMarch inosvika muItari
Base Chikwata chinosvika muMoscow